तीन लघुकथा श्रृंखला ३७ | साहित्यपोस्ट
प्रकाशित १ असार २०७८ १९:०१
(भक्तपुर जिल्लाको पहिलो कथाकार)
बालक रोइरहेको थियो, भोकले ।
‘खानेकुरो केही छैन ?’ उसले सोध्यो ।
‘छैन…,’ पत्नीको सपाट स्वर भित्रसम्म धसिसक्यो ।
उसले एक सुस्केरा हाल्यो–उफ् !
वरिपरि उसले आँखा फैलायो । फुङ्ग उडेको भित्ता देख्यो र देख्यो व्याप्त ईश्वरको उकुसमुकुसता मात्र !
‘घरमा बेच्नलायक कुनै चिज पनि त छैन…,’ एउटा चिसो उच्छवास चुहियो उसको ओठबाट ।
उसले बेस्कन आँखा चिम्ल्यो र बरबरायो– घरमा….। बालक रोइरहेको थियो– भोकले । सुकेको लाम्टा छातीमा झुलिरह्यो ।
‘हे भगवान !’ केही नपाएर उसले घुँडा टेक्यो ।
‘एउटा बाँकी छ…..भगवानकै मूर्ति,’ पत्नीको स्वरमा बिस्फोट भयो ।
‘के ?’ उसलाई विश्वास भएन र ट्वाल्ल परेर हेर्न थाल्यो ।
(भक्तपुर नेपालकै सानो जिल्ला हो र लघुकथा आख्यानको सानो रूप । यही सानो जिल्लाको पहिलो लघुकथाकार हुन् ध्रुव मधिकर्मी ।
ध्रुव मधिकर्मी तीसको दशकको लघुकथाकारहरूको एक नायक हुन् । उनले २०३५ सालमा “लघु” नामक संयुक्त लघुकृति प्रकाशन गरेका छन् । उनी धार्मिक पात्रहरूलाई लघुकथामा उतारी राजनीति र सामाजिक लघुकथाहरू लेख्न खप्पिस छन् । लघुकथामा निरन्तर लागिरहेका ध्रुव मधिकर्मी लघुकथा समाज, नेपालको केन्द्रीय समितिमा रही नेपाली लघुकथाको विकासमा काम गरिरहेका छन् ।
प्रस्तुत लघुकथा “बिस्फोट” गरिबीको कथा हो । कथाको शैली सूत्रात्मक छ । कथाले जस्तै विपत्तिमा पनि आशा जिउँदो हुने कुरो देखाएको छ ।)
“आजकल त्यो गोकुल निक्कै रञ्जितको घरमा धाएको देख्छु, के छ नि ! त्यस्तो यिनीहरुको आन्द्राभुँडी जोडिनुको रहस्य ?”
राधाले पनि थपी, “त्यो गोकुले बिना काम भौंतारिएर हिँड्थ्यो। आजकल त उस्को रवाफ नै बद्लिएको छ। के गर्छ काम-धन्दा ?”
अघिल्लीले फेरि थपी, “त्यही दुई नम्बरी त होला नि ! आजकल सबैको धन्दा त्यही त छ !”
यसरी गोकुलबारे चर्चा चलिरहेथ्यो। उसबारे सबै सशंकित थिए। टोल, छरछिमेकीका जिज्ञासाको पात्र बनेको थियो गोकुल। हुन पनि बिना कर्म मान्छे कसरी जीविकोपार्जन गर्छ ? भन्ने शंका त उब्जिहाल्छ सबैमा। त्यसै पनि गाउँ, टोलको काम नै अरुको चियो गर्नु त हो !
एकदिन पत्रिकामा एउटा विज्ञापन छापिएको देखेर गाउँका सब अवाक् भए । विज्ञापनमा उही “स्पर्म डोनर” बारेमा र गोकुलको तस्बिर छापिएको देखेर टोलका साराले उसको कमाई-धन्दाबारे थाहा पाए। अनि पो टोलबासीहरुले सहजै अनुमान लगाए कि, गोकुल र रञ्जित परिवारको साँठ्गाँठ अनि, रञ्जितले बिहे गरेको दसौं वर्षसम्म पनि उसकी श्रीमतीको बच्चा नभएको तर अहिले एक्कासि रञ्जित बाउ बनेको रहस्य !
विज्ञापनबाट यो रहस्य खुलेपछि ती चियोचर्चो गर्ने महिलाहरुले पश्चाताप गरे।
“हामीले ब्यर्थै रञ्जितकी श्रीमती र गोकुललाई कुदृष्टिले हेरेछौँ। आखिर मान्छेले मज्बुरीमा जे पनि गर्न बाध्य बन्छ। यो त रञ्जित र उस्की श्रीमतीको बाध्यता नै हो। सल्लाहले गरे ठिकै गरे। उनीहरुका शून्य काखमा पनि सुन्दर शिशु खेल्न पाए । गोकुलले पनि कसैलाई नठग्ने धन्दा नगरी, बरु धर्मै पो गरेछ !”
(नेपाली लघुकथाको ५० को दशकलाई सक्रियकालीन समय मानिन्छ । यही समयमा आचार्य प्रभाको लघुकथामा प्रवेश भएको देखिन्छ ।
आचार्य प्रभा क्रियाशील र हक्की स्रष्टा हुन् । उनी गीत, कविता, मुक्तक र लघुकथाहरू आफ्नो लेखनीको सुरूवातदेखि नै लेखिरहेकी छन् ।
प्रस्तुत लघुकथा “स्पर्म डोनर” को नेपाली अर्थ वीर्य दानकर्ता हुन्छ । यस्तो दान वा व्यवसाय नेपालमा नचलेकोले कथाको विषय अनौठो पनि हुन जान्छ तर विदेशी भूमिमा लामो समय बसेकी आचार्य प्रभाले आफ्ना लघुकथाहरूमा ड्यासपोरिक अनुभूतिहरू पोखेकी छन् ।)
“म त घर नभएको मान्छे,” कसैको प्रश्नको उत्तर दिँदै थिइन् उनी ।
“अलि काम हुने शाखामा सरुवा माग्नु हौ म्याडम ! यसो घर बनाउने जोहो हुन्छ ।” – मैले आँखा खोलिदिएँ तर उनी चासै नदिई ब्यागबाट डायरी र कलम झिक्न थालिन् ।
एक दिन बैंकका कर्मचारी आफ्नो बैंकमा डिम्याट खाता खोल्न आग्रह गर्दै शेयरको लगानी रणनीतिका बारेमा बुझाइरहेका थिए । उनले लगानी परिचालन, शेयर बजार, सुरक्षित लगानीका बारेमा उल्टै सुझाइन् ।
“यस्तो वित्तीय दक्षता भएको मान्छे त शेयर कारोबार गरेर मालामाल हुनु नि हौ !”- मैले प्याट्ट सुझाएँ। उनी फिक्स हाँस्दै मोबाइलमा कुनै कविको कविता वाचन सुन्न थालिन् ।
अर्को दिन म कोठाभित्र प्रवेश गर्दै गर्दा फोनमा कसरी पढे लोकसेवा पास होइन्छ ? विषयमा र पाठ्यक्रमको गहन अध्ययनका लागि कस्ता सामाग्री छनोट गर्ने ? कसरी फरक ढंगले प्रस्तुति दिने भनेर सिकाउँदै थिइन ।
“यो ज्ञान बाढ्नको लागि मेरो साथीको ट्युसन सेन्टरमा यसो बिहानको दुई घण्टा खर्चनु । दाम राम्रै दिन्छ,” मैले अवसर देखाइदिएँ । उनी बिना प्रतिक्रिया डायरीमा केही लेख्न थालिन् ।
मैले सहनै नसकेर भनेँ, “म्याडम ! लेखेर जिन्दगी चल्दैन ! भए भरका अवसर लत्याएर साहित्य ! आखिर के पाउनु हुन्छ यसबाट ?”
कहिल्यै नबोल्ने उनी एकाएक लगातार प्रश्न गर्न थालिन् ।
“तपाईले यी सब काम गरेर के पाउनुहुन्छ ?”
‘इच्छा पूरा गर्छु !’
‘सपिङ, घुमघाम, गरगहना, पाटी, मस्ती… ।’
‘सुखी हुन्छु । खुसी हुन्छु ।’
उनले अदबका साथ भनिन्, “तपाईंलाई खुसी भेट्न यति लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । मलाई त्यही खुसी भेट्न ‘लेखे र पढे’ पुग्छ । अब भन्नुहोस्, उस्तै खुसी भेट्नका लागि म त्यति लामो बाटो किन हिडूँ ?”
(पछिल्लो समयको लघुकथामा आशालाग्दो नाम लिनुपर्दा अनु विज्ञातिलाई छुटाउनु हुँदैन । उनी लघुकथा लेखन र विस्तारको लागि पूर्वको क्षितिजबाट उदाइरहेकी छन् ।
प्रस्तुत लघुकथा “खुसी” अनु विज्ञातिको एक शक्तिशाली लघुकथा त हो । यो लघुकथामा राम्रोसँग आँखा लगाउने हो भने यसले नेपाली उत्कृष्ट लघुकथाहरूसंग सिधै प्रतिस्पर्धा गरी लघुकथाको मघ्य भागमा रहन सक्छ । विज्ञातिले “खुसी”मा आकर्षक शैली र सटीक विषयको उठान गरेकी छन् ।)
तीन लघुकथा शृंखलादीपक लोहनी
सुरू भयो गजल प्रतियोगिताकाे बाह्राैँ चरणः गजल पठाउने समय ‘असार ८’सम्म